အပိုလို ၁၂ - ဝီကီပီးဒီးယား
လူလိုက်ပါ၍ လမျက်နှာပြင်တွင် ဆင်းသက်ခြင်း
၁၁၀,၀၄၄ ပေါင် (၄၉,၉၁၅ ကီလိုဂရမ်)
၁၁,၀၅၀ ပေါင် (၅,၀၁၀ ကီလိုဂရမ်)
en:Richard F. Gordon Jr.
November 24, 1969, 20:58:24 UTC
၁၀၁.၁၀ ကီလိုမီတာ (၅၄.၅၉ ရေမိုင်)
၁၂၂.၄၂ ကီလိုမီတာ (၆၆.၁၀ ရေမိုင်)
၃၄.၃၅ ကီလိုဂရမ် (၇၅.၇ ပေါင်)
စုစုပေါင်း:7hours, 45 minutes, 18 seconds
ပထမ:3hours, 56 minutes, 03 seconds
ဒုတိယ:3hours, 49 minutes, 15 seconds
← အပိုလို ၁၁ အပိုလို ၁၃ →
အပိုလို ၁၂ (နိုဝင်ဘာ ၁၄ - ၂၄ ၁၉၆၉) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အပိုလိုစီမံကိန်းမှ ၆ ကြိမ်မြောက် လူလိုက်ပါသော အာကာသပျံသန်းရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လကမ္ဘာသို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆင်းသက်သောယာဉ်ဖြစ်သည်။ ဖလော်ရီဒါရှိ ကနေဒီ အာကာသမြေပြင်စခန်းမှ ၁၉၆၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီး လမျက်နှာပြင်တွင် ၁ ရက်နှင့် ၇ နာရီခန့် လေ့လာစူးစမ်းမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အပိုလို ၁၂ သည် နီးလ် အမ်းစထရောင်း၏ အပိုလို ၁၁ စီမံကိန်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါက လကမ္ဘာပေါ်သို့ဆင်းသက်မည့် ပထမဆုံးအကြိမ် အာကာသယာဉ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အပိုလို ၁၂ အား ၂ လအကြာခန့် ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီး အပိုလို ၁၁ ထက် လကမ္ဘာ၏ မျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်သက်၍ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ချိန် ပိုရခဲ့သည်။ အပိုလို ၁၂ နှင့် အပိုလို ၁၁ တို့၏ အာကာသယာဉ်များသည် အတူတူနီးပါးခန့် တူညီကြသည်။
အပိုလို ၁၂ အား ကနေဒီ အာကာသစခန်းမှ မိုးရွာနေသည့်ကြားမှ ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် မိုးကြိုး ၂ ကြိမ် အပစ်ခံခဲ့ရသည်။ စက်ပစ္စည်း ပြဿနာ အနည်းငယ်ကြုံခဲ့ရသော်လည်း ပျက်စီးမှု အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ အပိုလို ၁၂ သည် လမျက်နှာပြင်တွင် ပထမဆုံး ရောင်စုံတယ်လီဗေးရှင်း ကင်မရာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် အပိုလို ၁၂ အဖွဲ့ဝင် Bean က ကင်မရာအား မတော်တဆ နေသို့ မျက်နှာမူခဲ့သောကြောင့် ကင်မရာ၏အာရုံခံကိရိယာ ပျက်စီးသွားပြီး ဒေတာပို့လွှတ်မှု ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည်။ လမျက်နှာပြင်တွင် ၂ ကြိမ်တိုင် လမ်းလျှောက်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခင်က စေလွှတ်ထားနှင့်သည့် Surveyor3အာကာသယာဉ်ဆီသို့ အလည်သွားရောက်ခဲ့သည်။ လပေါ်သို့ ဆင်းသက်သည့် Lunar Module Intrepid သည် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် လကမ္ဘာမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး လကမ္ဘာ၏ ပတ်လမ်းကြောင်းတွင် စောင့်ဆိုင်းနေသော Command module နှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ကာ ကမ္ဘာမြေသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် အပိုလို ၁၂ စီမံကိန်းသည် အောင်မြင်စွာဖြင့် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Orloff & Harland 2006, p. 331.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Orloff & Harland 2006, p. 573.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ Mission Report, pp. 5-1–5-5.
↑ Orloff & Harland 2006, p. 584.
↑ Mission Report, p. A-9.
သမိုင်း (အာကာသခေတ်၊ အာကာသပြိုင်ပွဲ Accidents and incidents) · Astrodynamics · Lists and timelines
အာကာသ တယ်လီစကုပ် - Space probe - Spacecraft propulsion - Spaceplane
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပိုလို_၁၂&oldid=683810" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။